एजेन्सी, विश्व सुन्दरी मानुषी छिल्लरले निर्देशक चन्द्रप्रकाश द्विवेदीको निर्देशनमा बन्न लागेको ‘पृथ्वीराज चौहान’मा अभिनेता अक्षय कुमारसँग बलिउडमा डेब्यु गर्ने भएकी छिन् । उनि प्रियंका चोपडा पछि पहिलो र विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता जित्ने छैठौं भारतीय महिला हुन् । सन् २०१८ मा भारतकी सर्वाधिक रुचाइएकी महिला बनेकी उनलाई अब फिल्ममा पनि देख्न पाइने भएको छ ।
यस्तो छ बलिउड अभिनेत्री करीना कपूरको पीडा
एजेन्सी, बलिउड अभिनेत्री करीना कपूरले जियो मामी मुभी मेलामा करण जौहर र आलिया भट्टसँगको कुराकानीको क्रममा अभिनेताको जति नै पारिश्रमिक आफूलाई पनि दिन माग गरेकी छिन् । कपूरले अभिनेता र अभिनेत्रीलाई बढी र कम पारिश्रमिक दिनुभन्दा पनि बराबर दिनुपर्ने कुराको वकालत गरेकी छिन् । उनी थुप्रै फिल्मबाट बाहिरिएको कारण पनि कम पारिश्रमिक नै हो त […]
बलिउड अभिनेत्री राधिका आप्टेले बिहेमा च्यातिएको साडी लगाएपछि …
एजेन्सी, बलिउड अभिनेत्री राधिका आप्टेले केही दिनअघि एउटा अन्तर्वार्तामा एउटा खुलासा गरेकी छिन् । त्यो हो– उनले विवाहमा च्यातिएको साडी लगाएकी थिइन् । उनले अन्तर्वार्तामा भनेकी छिन्, ‘मैले विवाहमा हजुरआमाको पुरानो मराठी साडी लगाएकी थिएँ । मलाई थाहा थियो, त्यो साडी च्यातिएको थियो र म हजुरआमालाई कति माया गर्छु भने च्यातिएको साडी नै लगाएर मैले […]
एजेन्सी, ब्राजिलकी नातालिया गारिले आफूलाई आकर्षक देखाउन व्यायाम गर्नेदेखि लिएर नियमित जिम जानुपर्छ भनेर सजग गराउन इन्ष्टग्राममा फोटो अफलोड गर्दै आएकी नातालियाको त्यहीँ काम अहिले आम्दानीको दरिलो स्रोत भएको छ । उनीप्रति विभिन्न व्यापारिक कम्पनीको आकर्षण समेत देखापर्यो जसका कारण कहिले कुनै कम्पनीले एउटा फोटो पोष्ट गर्न आग्रह गरे नातालिया प्रतिपोस्ट ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी […]
मोडल राखी शावान्तको हनिमुन तस्वीर भाइरल (फोटोसहित)
एजेन्सी, मोडल राखी शावान्त धेरै जस्तो विवादमा आइरेकी हुन्छिन् । राखीले सामाजिक संजालमा विवाहको तस्वीर सार्वजनिक गरेकी थिइन् । हाल उनको विवाहका तस्विरहरु भाइरल भैरहेका छन् । यो क्रममा उनले पुन हनिमुनको अर्को तस्वीर सार्वजनिक गरिन, जुन भाइरल भएको छ । सार्वजनिक तस्विरमा राखी सिन्दुर सहित देखिएकी छिन् ।
अदिती वुढाथोकीको हट अवतरण (फोटोसहित)
अदिती वुढाथोकीको २ बर्ष अगाडि रिलिज भएको चलचित्र ‘कृ’की मुख्य नायिकाले दर्शकमा आफ्नै प्रकारको प्रभाव पर्न सफल भइन् । तर, चलचित्रमा डेब्यू गर्दा उनीमाथि जुन खालको अपेक्षा थियो, त्यो चलचित्र रिलिज भएपछि पुरा हुन सकेन । यसपछि, चलचित्र बनाउने मेकरले अदितीलाई चलचित्रका लागि अफर गर्न त्यती रुची देखाएका छैनन् । अदिती पनि हतार छैन भन्दै […]
बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षीले यसरी घटाइन् ३० किलो तौल
बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा आजभोलि निकै फिट देखिन्छिन् । तर, एउटा समय थियो, उनी ९० किलोको थिइन् । उनले अहिले त करिब ३० किलो तौल घटाएकी छिन् । तौल घटाएर नै उनले फिल्ममा इन्ट्री मारेकी हुन् । उनले हरेक दुई घन्टामा केही न केही खाइन् र साँझ ६ बजेपछि केही पनि खाइनन् । उनले डिनर […]
लिउड अभिनेत्री रिया चक्रवतीको बोल्ड अवतारका तस्बिरहरु
एजेन्सी, लिउड अभिनेत्री रिया चक्रवती फिल्म हाफ गलफ्रेण्डु मार्फत पुन दर्शकमाझ आउने तयारीमा रहेकी रिया एक नयाँ विज्ञापनका लागि बोल्ड अवतारमा पनि देखिने भएकी छिन् । खबर अनुसार अब रिया स्वीमिङ सुटमा देखिने भएकी छिन् । सामाजिक सञ्जालमा बोल्ड फोटो शेयर गरेर चर्चामा आउने रिया यश राज फिल्मको बैंक चोरमा पनि देखिने भएकी छिन् ।
यस कारण बलिउडमा प्रियंका चेपडा कमजोर भइन्
एजेन्सी, बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चेपडाको कमब्याक कमजोर देखिएको छ । करिब ५० करोडको लागतमा निर्माण गरिएको प्रियंकाको कमब्याक चलचित्र “द स्काई इज पिंक” ले बक्सअफिसमा राम्रो कलेक्सन गर्न सकेन । फिल्मले प्रदर्शनको तीन दिनमा १० करोड ७० लाखको मात्र कमाई गरेको थियो । स्वदेश छोडेर विदेश जानु र भारतमा एक स्थापित अभिनेत्री हुँदा–हुँदै हलिउडमा नयाँ […]
एजेन्सी, ‘कौन बनेगा करोडपति’ मा अमिताब बच्चनले कार्यक्रममा भारतको कुनचाहिं राज्यमा सीताको जन्मभूमी भनी चिनिएको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक मिथिला छ भनी प्रश्न नै गलत सोधेका छन् । उत्तरमा उत्तर प्रदेश, विहार, झारखण्ड र उत्तराखण्ड विकल्प थियो । प्रश्न नै गलत भएपछि उत्तर ठिक आउनै सक्दैन । सीताको जन्मभूमी जनकपुर हो जुन नेपालमा पर्दछ । कौन […]
बोनीता शर्मा विश्वका प्रेरणादायी महिलाको सूचीमा
२९ असोज, काठमाडौं । एक नेपाली महिला अथवा चेली सोसियल चेन्ज मेकर एण्ड इनोभेटर्स संस्थाकी संस्थापक बोनीता शर्मा विश्वका प्रेरणादायक र प्रभावशाली १०० महिलाको सूचीमा पर्न सफल भएकी छन् । बीबीसीले हरेक वर्ष विश्वका विभिन्न क्षेत्रका प्रेरणादायक महिलाको सूची सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ ।
नायिका ऋचा थापाका समुन्द्रको तटमा खिचिएका सुन्दर तस्वीरहरु
असोज २९. काठमाडौँ । ऋचा थापा नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय चर्चामा रहेकी धेरै दर्शकको मनमा बस्न सफल एकदम सुन्दर मोडल हुन । उनले अहिलेसम्म करीव २ दर्जन भन्दा बढी गीतका म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेर आफ्नो कला देखाई सकेकी छिन् भने नायक यशराज गजराजसँग स्क्रीन सेयर गरेकी उनको डेब्यु फिल्म- ‘लभ यु हमेशा’ आउँदो कार्तिक २२ […]
हास्यकलाकार कपिल शर्माको एक एपिसोडको पारिश्रमिक खुलासा
एजेन्सी, हास्यकलाकार कपिल शर्माको कमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो’ मा पाहुना बनेका चर्चित संगीतकार उदित नारायणले शर्माको पारिश्रमिकबारे अचम्मित गरिदिने खुलासा गरेका छन् । उदित नारायणले भने, ‘तपाईंले त संघर्ष गर्न आवश्यक छैन । सुनेको छु कि तपाईंले एक–एक एपिसोडको १–१ करोड लिनुहुन्छ ।’उदित नारायणको यो शानदार जवाफ सुनेर सबैजना बेस्सरी हाँसे र कपिल […]
राजेश हमालले किन टिकाको दोस्रो दिन टीका लगाए ? तस्विरहरु
२३ असोज, काठमाडौं । नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश हमालले टीकाको दोस्रो दिन टिका लगाएका छन् । हमालको आफ्नो आमाको श्राद्ध पर्ने भएकाले टिकाको दिन टीका लगाएका थिएनन् । हमाल परिवारले टिकाको दोस्रो दिन टीका लगाए । हमालले दशैँमा श्रीमती मधु भट्टराईसँगै टीका लगाएको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन् । तस्विरहरु
बंगलादेशमा एक बेहुली नै जन्ती लिएर बेहुलाको घर पुगेपछी
एजेन्सी, बंगलादेशमा एक दुलही जन्ती बोकेर विवाह गर्न दुलहाको घरमा पुगेकी छिन् । १९ वर्षीया खदिजा अख्तर खुसीले आफ्नो पाहुनाका लागि यस्तो गरेकी भने होइनन् । खदिजाले बंगलादेशका सबै महिलाले उनको अनुसरण गर्लान् भन्ने आशाले यस्तो गरेकी हुन् । यो देशमा शताब्दिऔं देखि विवाहका लागि दुलहा दुलहीको घर जाने चलन छ । खदिजाले आफ्नो विवाहको […]
१३ असोज, काठमाडौं । पछिल्लो समय फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्रक्रिया निकै बढ्दै गएको पाइन्छ । नवकलाकरको रुपमा फिल्म क्षेत्रमा पाइला टेक्ने कलाकारहरु थुप्रै छन् । तर कतिपयहरु यस क्षेत्रमा सफलता साहिल गरेका छन् भने कतिपय कलाकारहरु त्यति चल्न सकेका छैनन् । तर कुनै कलाकारहरु यस्ता छन् । जुन एउटा फिल्मवाटै आफ्नो नाम फिल्म क्षेत्रमा […]
यी महिलाको लागि एकचोटी कपाल धुन मात्रै ६ बोतल स्याम्पु
एजेन्सी, अमेरिकाको फ्लोरिडामा बस्ने आशा मंडेलाको कपाल एक पटक मात्र धुनको लागि ६ बोटल त स्याम्फु मात्रै लाग्छ । कपाल पुर्ण रुपमा सुक्न मात्रै कम्तिमा दुइ दिन लाग्छ । कपालको तौल मात्रै २० केजी छ । र लम्बाइ ५५ फिट लामो छ । गाडिमा हिड्दा आफु साइडको सिट कपाल राख्नको लागि प्रयोग हुन्छ । अहिले […]